Spray Arnica - Katrafay : manala fanaintainana sy mangana
Eny amin’ny Homeopharma no ahitana an’ity “Spray Arnica- Katrafay” ity. Singa roa samy hafa no natambatra nahazoana azy dia ny “arnica” sy ny katrafay. Any amin’ny hozatra no tena miasa izy ity.
Lohamenaka katrafay sy zava-maniry iray antsoina hoe “arnica” no natambatra ka nahazoana an’ity akora miendrika “spray” ity. Manala havizanana, manome hery, manamafy ny hozatra ny katrafay. Ampiasaina hanatoniana ny fanaintainanan’ny hozatra sy ny vanintaolana ihany koa anefa izy. Ny “arnica” kosa indray dia hanasitranana sy hampitoniana ireo dona na mangana na fery amin’ny vatana.
Atsifitra amin’ny faritra marary na manaintaina ilay “spray”. Arahina otra kely na kosehina malefaka.
Vidiny : Manodidina ny 7.000Ariary eny amin’ny ivon-toerana Homeopharma, ny tavoahangy kely 60ml.